I-Syncari: Dibanisa kwaye ulawule iiDatha eziSebenzayo eziSebenzayo, ukuZenzekelayo kokuSebenza nokuSasaza iiNkcukacha ezithembekileyo naphi na. | Martech Zone
Iinkampani zirhaxwa kwidatha eqokelela kwiCRM yazo, kwintengiso ezenzekelayo, ERP, kunye neminye imithombo yedatha yelifu. Xa amaqela asebenzayo abalulekileyo engavumelani ukuba yeyiphi idatha emele inyani, intsebenzo iyathintelwa kwaye iinjongo zengeniso kunzima ukufikelela kuzo. USyncari ufuna ukwenza lula ubomi kubantu abasebenza ii-ops zentengiso, ii-ops zentengiso, kunye ne-ops yengeniso abasoloko besokola nedatha yokufumana indlela yokufikelela kwiinjongo zabo.
ISyncari ithatha indlela entsha yokudityaniswa, ukuzenzekelayo, kunye nolawulo lwedatha. Iqonga labo ledatha elipheleleyo limanyanisa, amanqaku, kunye nokucoca idatha kuzo zonke iinkqubo zakho eziphezulu. Ngokungafaniyo neWorkato okanye iMuleSoft, iSyncari ibonelela ngemisebenzi yolawulo lwedatha engenakhowudi ukunceda abasebenzi ukuba basebenzise iinkqubo zabo ngedatha abayithembileyo. Iqonga lolawulo lwedatha emva koko lisasaza idatha ethembekileyo kunye nokuqonda kubuyela kuwo onke amasebe umthombo wenyaniso kwaye ugcine ezi nkqubo zingqamene nomnye njengoko kuvela idatha engcono. Oku kukhulula amaqela akho kumthwalo wovavanyo lwedatha ngesandla kunye nokucoca ngokubeka ngaphakathi kunye nokuzinzisa ukuqiniswa kwedatha, ukwenziwa kwesiqhelo, kunye nokuphinda-phinda.
ISyncari yindlela ebhetele yokuphucula ingqokelela yedatha yeshishini. Idibanisa ngokukodwa amandla e-FiveTran, indawo yokugcina idatha (umzekelo, i-Snowflake), kunye neCensus / Hightouch kwiqonga elinye elipheleleyo ukuze kube lula ukwenza ukudityaniswa kokuphela kokuphela. ISyncari idibanise ukudityaniswa, ukuzenzekelayo, kunye nolawulo lwedatha kwiqonga elinye lokuxhobisa wonke umntu ukuba alulame olu hlaselo ngokuthatha indlela yokuqala yedatha.
Iqonga loLawulo lweDatha leSyncari libonelela:
Imodeli yedatha emanyeneyo Yonke inkqubo ichaza abathengi ngendlela eyahlukileyo. Siqhele le nto kuwe, ke iinkqubo zakho zonke zinokuthetha ulwimi olunye.
Ukuvumelanisa ngeendlela ezininzi -Gcina idatha yenkqubo enqamlezileyo ihambelane nenjini yethu yokulinda ilungelo lomenzi eligcina ilizwe kwaye lilawula idatha kuyo yonke inkqubo exhunywe ngokuzenzekelayo.
Ulawulo lwe-schema oluzenzekelayo -Ukuba iindawo ezintsha zongezwa okanye zisuswe kuwo nawuphi na umthombo wedatha, iSyncari ihlaziya ngokuzenzekelayo zonke iinkqubo ezichaphazelekayo. Sala kakuhle ukophula utshintsho!
Ukuhanjiswa kwedatha -Izinto ezizenzekelayo kunye nemigaqo-nkqubo yedatha eyenziweyo eSyncari inxibelelana nayo yonke imithombo yedatha eqhagamshelwe kwimodeli yedatha emanyeneyo, eyenza ukungqinelani kwedatha okungazange kubonwe ngaphambili.
Ngokungafaniyo nesiko izihlanganisiIisynapsari zeSyncari ziqonda ngokunzulu iinkqubo zokugqibela zeskimas, zibonelela ngokudityaniswa okunzulu kwemisebenzi ethile enjengokudibana kunye nokucinywa okuthambileyo, kunye nokulawula iimpembelelo zotshintsho lwe-schema kuyo yonke iSynapse exhunyiwe. Ilayibrari yabo yokudityaniswa kubandakanya i-Airtable, iAmazon S3, iAmazon Redshift, iAmzon Kinesis, iAmplitude, iDrift, iEloqua, iIntercom, iMicrosoft Dynamics 365, iFreshworks CRM, iGainight, uGold BigQuery, iiSpredishithi zikaGoogle, iHubspot, iJira, iMarketo, iMixpanel, iMySQL, iNetSuite , Outreach, Salesforce Pardot, Pendo, PostgreSQL, Salesforce CRM, Sage Intactt, SalesLoft, Snowflake, Workday, Xero, Zendesk, kunye neZuoro.
Cela iDemo yeSyncari
tags: I-Redshift yaseAmazonamazon s3ubukhuluAmzon Kinesisesizisebenzelayokubaloengenakhowudiukudityaniswa kwekhowudiukuzenzekelayo kwedathaukudityaniswa kwedathaLawulo lwe dataiqonga lolawulo lwedathayokugcina idathayitsale uyiwiseTsala kwaye ulahle ukudityaniswabegcinaeloquaShishiniidatha yeshishiniEzintlanuUmsebenzi weCRMukubona kakuhleGoogle BigQueryAmaSpredishithi eGooglehightouchhubspotukudityaniswaintercomJiralawula idathauphawuImicrosoft dynamics 365MixpanelmysqlnetsuiteukufikelelaPendoPostgreSQLSage uhambelanaicandelo labathengisiukuthengisa uxoleloIntengisoLoftSnowflakeumthombo wenyanisoWorkdayXerozendeskZuora
Meyi 13, 2021 kwi-3: 03 PM
Enkosi ngokusigubungela. Oku kubhalwe kakuhle! Kuyanconywa kakhulu kwaye ukuba ndinokukunceda nangayiphi na indlela, ungathandabuzi ukufikelela ngaphandle.
Meyi 14, 2021 kwi-4: 25 PM
Enkosi ngenqaku, uNick! Ndijonge phambili ekwahluleni nzulu-sele ndithumele ulwazi kwabanye abahlobo.